रक्सि लाग्यो ? यसरी हटाउनुस् ह्याङओभर ! - inaruwaonline.com
रक्सि लाग्यो ? यसरी हटाउनुस् ह्याङओभर !
प्रकाशित मिति: आइतबार, कार्तिक २२, २०७२ समय: ६:४४:०३
कफी अथवा चियाको लत भएकालाई ह्याङओभर भयो भने उनीहरूले हर्बल टी खानु राम्रो हुन्छ । यसले शरीरमा पानीको मात्रा घटाउँदैन ।स्वास्थ्य खबरपत्रिका